အိမ်မြေအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်စဉ် ပူးတွဲပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားလျှင်…. – Nk Real Estate
အိမ်မြေအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်စဉ် ပူးတွဲပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားလျှင်….
ထီယု (ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ)
အိမ်မြေအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်စဉ် ပူးတွဲပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားလျှင်
“ပူးတွဲပိုင်ရှင်တစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆရာ’’ ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူထံ လာရောက်ဆွေးနွေးပါသည်။
“အိမ်မြေဝယ်ထားတာ ရှိလို့လား’’ ဟု စာရေးသူက မေးလိုက်ပါသည်။
“ဟုတယ်ဆရာ၊ မြေတစ်ကွက် ဝယ်ထားတာဆရာ။ အိမ်ကတော့ ပျဉ်ထောင်အိမ်သေးသေးပါ’’
“စရန်ငွေ ပေးစဉ်ကတော့ ပိုင်ရှင် ၂ ဦးလုံးရှိတယ်ဆရာ။ အခု ငွေအပြီးချေဖို့ ကိစ္စကြတော့ ။ ကွယ်လွန်သူရဲ့ ဝေစုကို ဘယ်သူထံပေးရမှာလဲဆိုတာ အခက်အခဲ ရှိနေတယ်’’
“သတင်းစာထဲ ထည့်ကြော်ငြာခဲ့တာ ရှိလား’’
“သတင်းစာထဲမှာ ထည့်ကြော်ငြာစဉ်က ပူးတွဲပိုင်ရှင် ၂ ဦးလုံး ရှိနေတယ်ဆရာ။ ကန့်ကွက်သူ မရှိခဲ့ဘူး’’
“အင်းပေါ့လေ၊ ကွယ်လွန်တာက အခုမှဆိုတော့ ကန့်ကွက်သူ မပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့။ အခုအချိန်မှာ ကန့်ကွက်သူ ပေါ်လာလို့လား’’
“ကန့်ကွက်သူတော့ မပေါ်ပါဘူးဆရာ။ ဒါပေမဲ့ ကျန်ငွေကို ပူးတွဲပိုင်ရှင်ကိုပဲ ပေးရမှာလား။ ကွယ်လွန်သူရဲ့မိဘကို ပေးရမှာလားဆိုတာ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေလို့’’
“ပူးတွဲပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားရင်တော့ ကွယ်လွန်သူရဲ့ သား၊သမီး ဇနီး စတဲ့ တိုက်ရိုက်အဆက်နွယ်ရှိရင်တော့ ထိုသူတို့က ကွယ်လွန်သူနေရာမှာ ပူးတွဲပိုင်ရှင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။’’
“ ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူက လူပျိုလို့ ပြောတယ်ဆရာ’’
“ဒါဆိုရင် တစ်မျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့။ ပူးတွဲပိုင်ရှင် အချင်းချင်းက ဆွေမျိုးတော်ကြလား’’
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ၊ မောင်နှမ ၂ ယောက်ပါ’’
“မြေပိုင်ရှင်က မောင်နှမ ၂ ဦး ပူးတွဲ ပိုင်ရှင်တွေပေါ့။ မောင်နှမို့ဆိုလို့ မောင်နှမ အရင်းတွေပဲလား’’
“ဟုတ်တယ် ဆရာ။ သူတို့ပြောစကားအရတော့ မောင်နှမအရင်းလို့ သိရပါတယ်။’’
“မောင်နှမ ၂ ယောက် ပေါင်းပြီး ဝယ်ထားတာလား’’
“မဟုတ်ဘူး ဆရာ။ အမေဖြစ်သူက အပေးစာချုပ်နဲ့ ပေးကမ်းထားတာဆရာ’’
“မေတ္တာနဲ့ ပေးကမ်ခြင်းဆိုတော့ ပေးကမ်းစာချုပ်က မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ပေးကမ်းထားတာလား’’
“ဟုတ်တယ် ဆရာ။ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်’’
“ ဒါဆိုရင် မြေအမည်ပေါက်လည်း ပြောင်းပြီးပြီးပေါ့”
“မြေအမည်ပေါက်တော့ မပြောင်းရသေးဘူးဆရာ။ အမေကြီး အမည်ပေါက် ဖြစ်နေသေးတယ်’’
“ အခြား ညီရင်း ညီမတွေ ရှိသေးလား။ မောင်နှမ ၂ ယောက်တည်း ရှိတာလား’’
“သူတို့ပြောစကားအရတော့ ဒီမောင်နှမ ၂ ယောက်တည်းပဲ ရှိတာလို့ ပြောပါတယ်’’
“အပေးစာချုပ် ပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် သားသမီးအားလုံးထဲက တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပေးတာမျိုးရှိတတ်တော့ သေချာစုံစမ်းဖို့တော့ လိုတယ်’’
“သတင်းစာထဲ ကြေညာစဉ်ကလည်း ကန့်ကွက်သူမရှိဘူး။ ပြီးတော့ အမည်ပေါက် မိခင်ကြီးကလည်း ရှိသေးတယ်’’
“ မိခင်ကြီးက စိုးရိမ်ပြီး အပေးစာချုပ် ချုပ်ထားခဲ့တာ ထင်တယ်’’
“ သူတို့ပြောပြချက်အရတော့ ဖခင်ကြီးနှင့် မိခင်ကြီးက ကွဲနေကြတာလို့ ပြောတယ်။ ဖခင်ကြီးက နောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားတာဆရာ။’’
“ဖခင်ကြီးက သက်ရှိထင်ရှား ရှိသေးလား’’
“ဖခင်ကြီးက ကွယ်လွန်သွားပြီ ပြောတယ်။ ကွာရှင်းစဉ်က အခုအိမ်နဲ့မြေကို မိခင်ကြီးက ပိုင်ဆိုင်ခွဲဝေလိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်’’
“ဒါဆိုရင်တော့ ဖခင်ကြီးအပိုင်းကို စဉ်းစားဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့’’
“မိခင်ကြီး သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့ သားရဲ့ဝေစုကို မိခင်ကြီးက ရပိုင်ခွင့်ရှိမှာပေါ့’’
“ပူးတွဲပိုင်ရှင်က မောင်နှမအရင်းဖြစ်နေတော့ ပူးတွဲပိုင် ကျန်မောင်နှမကပဲ အမွေဆက်ခံခွင့် ရှိမှာဖြစ်တယ်’’
“မိခင်ကြီးက သူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ပေးထားတာဆိုတော့ သူပဲရပိုင်ခွင့် ရှိတယ်မလား’’
“သာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ ဟုတ်သလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ မေတ္တာနဲ့ ပေးကမ်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အရ သားနဲ့သမီးက ပူးတွဲပိုင်ရှင် ဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီသားနဲ့သမီးက မ်ိခင်နှင့်အတူနေကြတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပေးကမ်းလိုက်တဲ့ အိမ်မြေကို လက်ခံသူ ၂ ဦးက လက်ရှိနေထိုင်နေတာကြောင့် လက်ရောက်ပေးအပ်တဲ့သဘော သက်ရောက်သွားတယ်’’
“ဒါဆိုရင် မိခင်ကြီးက အမည်ပေါက်နေပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘူးပေါ့’’
“မြေအိမ်အမည်ပေါက်က အမည်ပေါက် မလျှောက်ထားခဲ့လို့ မိခက်အမည်နဲ့ရှိနေတာ။ ဥပဒေအရတော့ ပေးကမ်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အရ ကွယ်လွန်သူ သားနဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ သမီးတို့ကသာ ပူးတွဲပိုင်ရှင် ဖြစ်ပါတယ်’’
“ဆရာပြောသလိုဆိုရင် ကွယ်လွန်သူအစ်ကိုရဲ့ ဝေစုကို ပူးတွဲပိုင်ရှင် ညီကပဲ ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့’’
“မှန်ပါတယ်။ မြန်မာဓလေ့ထုံးထမ်း ဥပဒေမှာ ကွယ်လွန်သူရဲ့ ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ သားသမီး၊ မြေး၊ မြစ် အစရှိသော တိုက်ရိုက်အဆက်အနွယ်များ၊ ကိတ္တိမသားသမီး၊ လင်ပါမယားပါ သားသမီးနှင့် ကိဠိတသားသမီး အစရှိသူများမှရှိလျှင်-
(၁) ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ၊
(၅)ဦးကြီး၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်ကြီး၊ ဒေါ်လေး၊
(၆)တူ တူမ များ၏ သားသမီးများ
စသဖြင့် အဆင့်ဆင့်အမွေ ဆက်ခံခွင့်ကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်’’
“ဥပဒေအရဆိုရင် ကွယ်လွန်သူရဲ့ အမွေကို ညီအကို မောင်နှမက မိဘထက် ဦးစွာရနိုင်တဲ့ သဘောပေါ့’’
“ဟုတ်ပါတယ်။မနှင်းဘွင့်နှင့် ဦးရွှေဂုဏ် အောက်မြန်မာ စီရင်ထုံး၊ အတွဲ(၁) စာမျက်နှာ (၁) အမှုမှာ ကွယ်လွန်သူနှင့်အတူနေထိုင်သူ အစ်မကတစ်ဖက်၊ ဖခင်ကတစ်ဖက် အမွေလုရာ အစ်မဖြစ်သူက ရရှိသည်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေရဲ့ ကိစ္စမှာ ညီမဖြစ်သူက ကွယ်လွန်သူ အစ်ကိုလူပျိုရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံခွင့် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။’’
“ဒါဆိုရင် ညီမနဲ့ပဲ အရောင်းဝယ်စာချုပ် ချုပ်ရမှာပေါ့’’
“ညီမဖြစ်သူက အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတို့နဲ့ အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုထူးခြားနေတာက အမည်ပေါက်က သက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ မိခင်အမည်ပေါက်နေတော့ မိခင်နဲ့ တိုက်ရိုက် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိတာမို့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်”’